ukuqubuka Allergic ngokuthi ezahlukene iguliswa Izilonda ezifana eczema, atopic dermatitis noma urticaria. Lezi zifo zenzeka ngokumelene isizinda ukuzwela anda zomzimba womuntu, isibonelo, ukudla okuthile, imithi, izitshalo nokuningi.
Ngokuvamile izimpawu i ukuqubuka iguliswa kuhambisana Ukulunywa, evutha, ukuvuvukala, kanye ububomvu kwesikhumba. Ngaphezu kwalokho, kungase kube kumiswa soma noma cwilisa.
Uma sikhuluma ukuvela imbangela evamile ukuqubuka nomzimba, yena wabe esechaza ukukhululwa kwe histamine esikhumbeni, okuholela izimpawu ngenhla.
Umzimba ongezwani nezinto ukuqubuka emzimbeni izimbangela:
NACP isinyathelo futhi emazingeni okushisa kanye emisebeni yelanga;
Ukusabela ezintweni ezihlukahlukene;
ukuzwela umuntu akwazi ukuyeka izidakamizwa;
ukungezwani sezinzwa futhi ukucindezeleka.
Singasho ukuthi ukuqubuka iguliswa avame kubonakala labo linganciphisa immenitet.
Akukhona njalo kungenzeka ukuba wenze ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe of luhlolo lesiguli. Kaningi yembula imbangela ukuqubuka esikhumbeni nzima. Ukuze wenze lokhu, kufanele enze ukuhlola isikhumba, kanye ukuqeda ukudla okuthile. Kubalulekile kakhulu ukuba banake ubunjalo izifo yangaphambili nesineke, kanye nesikhathi okwenziwe ukuqubuka.
Ingozi kungenzeka ukuqubuka iguliswa uma lasungulwa mhlaka ulwelwesi lwamafinyila we umphimbo noma ulimi. Kulokhu, kungase ukuhlukumeza ukugwinya, noma iphika. Ngakho kubalulekile ukubhekana ngokushesha kudokotela. Uma uke osekuyisikhathi eside i ukuqubuka nomzimba, impatho engasekelwa kwenziwe, kungenzeka ifomu njalo dermatitis noma eczema.
Konke kuncike esigabeni i ukuqubuka iguliswa emzimbeni wesiguli. Ekuqaleni, kuze lonke uvivinyo ezidingekayo abazenzi, kubalulekile ukuze akhulule ukulunywa futhi ububomvu. Lokhu kwenziwa kusetshenziswa ukulibopha ekhethekile abandayo noma ngezinye izindlela, okuyinto uzokweluleka udokotela. Khona-ke, ngemva sokunquma eyinkimbinkimbi ukuqubuka nomzimba, ukuhlolelwa lesi sifo futhi wabelwa ukwelashwa ngabanye.
Kukhona yokwelapha hormone ngezigaba eziyinkimbinkimbi, okumele kwenziwe ngaphansi kokuqondisa odokotela. Phakathi ukwelashwa, udinga ukumboza endaweni ethintekile kusuka ezihlukahlukene ezenzeka.
Kubalulekile futhi ukuba balandele yokudla futhi ungadli ukudla okungase kubangele ukungasebenzi ukusabela nomzimba. Abanye odokotela batusa i ngisho uyeke ukubhema nokuphuza. Kwezinye izimo-ke kuyadingeka ukuze zigweme ukuthintana amanzi, izingubo zokwenziwa futhi sizame hhayi ngaphansi ezimweni ezicindezelayo. Singasho ukuthi ukuqubuka iguliswa kuxhomeke ezicini eziningi zingagwemeka.
Kuze kube manje, kukhona izindlela eziphumelelayo ongazisebenzisa ukuze ngokushesha futhi ngokunembile uhlonze ukuqubuka nomzimba. Ngokwesibonelo, igazi eliphelele ukubala. kukhona eziningi zocwaningo oluthile futhi ukuhlolwa isikhumba ukuthi ukubone ngokuthe ngqo khona lesi sifo.
Ungakhohlwa mayelana nezindlela zokuvimbela ngalo ungakwazi ukuvimbela allegricheskoy ukuqubuka. Zama ukuba isikhathi eside elangeni eliza ngqo, futhi ugweme izinguquko okungazelelwe lokushisa, zigweme ukuthintana amakhemikhali, sebenzisa spetsailnye Ukulunywa anti-isinambuzane, ungadli loko kudla ngaphambilini owakwenza ukusabela nomzimba. Futhi, ngokusho kodokotela abaningi ukugwema izimo ezibangela ukucindezeleka, ngokumelene okungase kube khona ukuqubuka nomzimba.
Tifo letibangwa emalungeni: ukuqina kwamathishu subchondral, njengoba omunye izimpawu osteoarthritis
Izincomo sendlela usethe isilinganisi